जहाँ लकडाउन अन्त्य भएको खुशियालीमा रात्रिभोज गरियो
लकडाउन अन्त्य भएको खुशियालीमा चेक गणतन्त्रको राजधानी प्रागमा १६ सय फुटको टेबल बनाएर सार्वजनिक रात्रिभोज गरिएको छ।
सरकारले विशाल भेला खुला गरेपछि शहरका गल्लीदेखि प्रख्यात चार्ल्स ब्रिजसम्म स्थानीय भेला भएका थिए। कोरोना भाइरसको महाव्याधि सुरू भएपछि चेक गणतन्त्रले बन्दाबन्दी गरेको थियो। नागरिकलाई मास्क लगाउन अनुरोध गर्ने पहिलो देशमध्ये चेक गणतन्त्र पनि एक हो। योसँगै देशले महाव्याधिको गम्भीर प्रभाव हुन दिएन र अन्य थुप्रै देशभन्दा बन्दाबन्दी खुकुलो पनि बनायो।
फलस्वरूप स्थानीयले देशले गरेको प्रगतिमा सामाजिक दूरी हटाएर घरबाहिर भोज गरे।
तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले महाव्याधि अन्त्य नभएको चेतावनी दिएको छ। चेक गणतन्त्र सरकारले अझै थुप्रै विदेशीलाई आफ्नो सीमा प्रवेशमा रोक लगाएको छ। यो नियमले पनि भोज सम्भव भएको हो।
“हामी कोरोना भाइरस संकट अन्त्य भएकोले खुशी मनाउन चाहन्छौं। एकअर्कालाई भेट्न कुनै डर छैन भन्ने देखाउन चाहन्छौं,” कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्राग क्याफेका मालिक ओन्द्रेज कोब्जाले भने।
“सबैले केही योगदान दिनुपर्ने गरी कार्यक्रम बनाइयो। कसैले खाना ल्याए। कसैले फूल ल्याए। सबै संलग्न हुन् भन्ने ध्येय थियो,” कोब्जाले भने।
सेतो कपडाले छोपिएको टेबलमा फूल सजाइएको थियो। साँझ घाम डुबेको हेर्दै स्थानीयले खानपिन गरे।
चेक गणतन्त्रको जनसंख्या करिब एक करोड छ। जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार देशमा करिब १२ हजार कोरोना भाइरस संक्रमित हुनुका साथै तीन सय ४९ जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी युरोपेली मुलुकभन्दा चेक गणतन्त्रमा तुलनात्मक रूपले थोरै प्रभाव परेको छ।
बन्दाबन्दी लागु गरेको महिनौंपछि युरोपेली संघले मंगलबार केही नियम कार्यान्वयन गरेको छ। अब १४ देशका यात्रुले युरोपेली संघका देश प्रवेश गर्न पाउने भएका छन्। तर त्यसमा अमेरिका परेको छैन।
युरोपेली संघले तय गरेको सुरक्षित मापदण्डभित्र अमेरिकाको अवस्था समावेश गरिएको छैन।
Published Date: Friday, 3rd July 06:37:03 AM
कोरोना भाइरसको खोप परीक्षणका मेरा तीता-मिठा अनुभव
क्यालिफोर्नियामा फैलिँदो घृणा : एसियालीविरूद्ध तीन महिनामा ८३२ वटा दुर्व्यवहारका घटना
के डिप्रेसन निको हुन्छ ? कसरी पाउने मुक्ति ?
चिनी खाए मुटु वरपर बोसो जम्ने
डिप्रेसनका बिरामीमा मुटुरोगको उच्च जोखिम हुन्छ : अध्ययन
मास्क लगाउनु आपसी सम्मानको संकेत हो
पेटको बोसोले डिमेन्सिया हुने जोखिम धेरै
मर्निङ रिड :
नियमित सेक्सका फाइदाहरू
पोर्न सुरक्षासम्बन्धी न्यूजिल्यान्ड सरकारको सन्देशमुलक भिडियो भाईरल
बालबालिका र किशोर किशोरीलाई मोटोपनको समस्या दश गुणा धेरै
कोभिड-१९ सङ्कटले विश्वको गरिब जनसंख्या १ अर्बभन्दा धेरै पुर्‍याउने
बलात्कारसम्बन्धी समाचारको चित्र वा ग्राफिक्स कस्तो हुनुपर्छ ?